ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်း ရှိ ငှားရန် ** Condo For Rent In Yankin Township., **, ကွန်ဒို | ShweProperty.com
ငှားရန် - ကွန်ဒို - ** Condo For Rent In Yankin Township., **
* Price - US 1000
* Living area : 1450 sqft
-2Normal bedrooms
- (4) numbers of air-cons are already installed, Fully Furniture
- (2) bathrooms
- Parquet, Living room, dining room, Kitchen
* Others Amenities;
- Rooms have air conditioners with windows for maximum natural lights
* Cause of situated in fair and good place.
* Located in Yankin Township.
*Has very good transportation options and it is only takeafew minutes away from Shopping Malls and schools.
Property ID: S-1186606
အိမ်ခြံမြေ အမည် : ** Condo For Rent In Yankin Township., **
Golden City Condo တွင် အခန်းငှားရန် ရှိသည်။
For Rent ( Lake View )
LT1901005392: 2BR unit for rent in Golden City
LT1901005389: 1BR unit for rent in Golden City
Rent condo ( Close to Myanmar plaza )
CRA-687, ပညာ့ဝတီကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒို အခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-664, Golden City Condo တွင် အကျယ်(514sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-620, Golden City Condo တွင် အကျယ်(760sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-619, Golden City Condo တွင် အကျယ်(930sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-618, Golden City Condo တွင် အကျယ်(760sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-612, အောင်ဇေယျလမ်းတွင် အကျယ်(31x42) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-609, ရန်ကင်းစင်တာတွင် အကျယ်(1700sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
CRA-580, Golden City Condo တွင် အကျယ်(514sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
LT1901005361:3bedrooms unit for Rent in Yankin
LT1901005359: 4BR unit for rent in Golden City
CRA-555, ပညာ့ဝတီကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒိုအခန်း အမြန်ငှားမည်။
Shweproperty ID: S-1186606